Anyị tinye ederede utu aha anyị oru ngo na-agwa na-ege ntị ihe ha nwere ike ghara chepụta na ha onwe ha, dị ka aha nke anyị omume, aha nke onye na-ekwu okwu, ma ọ bụ nka na ụzụ nkọwa banyere otu isiokwu.
Final Cut Pro X nwere fọrọ nke nta 200 dị iche iche ederede mmetụta na anyị nwere ike ịgbakwunye, ma usoro nke na-agbakwunye utu aha bụ nnoo otu ihe ahụ. Agbakwụnye utu aha bụ ihe isiokwu a bụ banyere.
Dị nnọọ ka na anyị niile na otu peeji, ebe a bụ m ọkwụkwọ isi okwu metụtara ederede:
Ederede ma ọ bụ utu aha. Okwu enịm na ihuenyo. M na-eji okwu ndị a na nka weba na.
Superimpose. Text egosipụta na na ihuenyo na ndị ọzọ video n'okpuru ya. Ndị a na-akpọ "supers" ma ọ bụ "mkpịsị ugodi."
Ihuenyo zuru oke. Text nke enyene dum ihuenyo.
Lower-na-atọ. Text nke dabara n'okpuru a onye okwu; ke "ala-na-atọ" nke ihuenyo.
Info-ndịna. Full-ihuenyo ederede nke a na karịrị on a graphic, n'ozuzu iji ibuga oru ọmụma. Ahụkarị ojiji bụ egwuregwu
ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ ozi ndị ọzọ nke bụ mfe ibuga iji ederede karịa inwe onye-agụ okwu.
Na naanị ISI
Ga-amasị m ịme "Yertle," ọ bụ ihe a oké osimiri mbe na kpakpando nke isiokwu a. (Footage n'ikike nke Jim Walker na Lobsters Gara Wild Productions.)
Na ya mfe, anyị na-eji utu aha na-egosipụta ya (ya?) Aha.
Na usoro iheomume, na-etinye playhead ebe ị chọrọ a aha na-egosi na ụdị Mgbanwe + Control + T. Nke a inserts ndabara ala-na-atọ aha na ọnọdụ nke playhead. The aha, dị ka fọrọ nke nta niile utu aha, nwere ndabere oge nke 10:00 sekọnd.
Anya na nchọgharị na-ahụ na ihe arụ ọrụ gị. A ala-na-atọ aha karịrị n'elu video ke ala n'akụkụ aka ekpe. (Aga m ekwu okwu banyere formatting ederede ole na ole na paragraf.)
IHE: The nnukwu mmachi nke a ala-na-atọ aha ya bụ na ọ nwere ike na-positioned na akaekpe. Akpụ akpụ ya na etiti ma ọ bụ nri akuku-achọ ntuziaka ukpụhọde.
Ị ọkwá ma ọ bụ ewepụtụ a aha ahụ dị ka ọ bụla video clip: ịdọrọ clip na ebe dị iche, ma ọ bụ ịdọrọ onu ịgbanwe ya oge.
Họrọ ka utu aha ahụ na ihichapụ ya site na ịpị Nhichapụ isi.
Oge a, pịnye Control + T na ndabere zuru-ihuenyo aha na-egosi na center nke ihuenyo. Ọzọ, nke a nwere a ndabere oge nke 10 sekọnd.
Ọ bụrụ na ị na-ele nri na etiti nke ihuenyo, ị ga-ahụ okwu ahụ "Mbụ." Ee, ya darn nso apụghị ịhụ anya. Na, ee, ya anya, um, jọrọ njọ. Otú ọ dị, anyị nwere ton nke formatting akara na-eme ka a na anya Otú ọ dị anyị chọrọ.
Họrọ na ihichapụ na zuru-ihuenyo aha.
N'ebe ahụ bụ otu ihe n'ụzọ na-etinye a aha: adọkpụpụta si Aha Nchọgharị.
Pịa Mbụ na akara ngosi na Toolbar. Nke a na-egosiputa ọdịnaya nke Mbụ Nchọgharị. Na kọlụm na ekpe ngosipụta aha edemede, aịkọn na nri na-egosi onye utu aha, search igbe na ala-enye gị ohere iji chọọ kpọmkwem utu aha site aha, mgbe nọmba na ala nri na-egosi na ọnụ ọgụgụ nke utu aha ugbu a egosipụta. (Gị ọnụ ọgụgụ ahụ pụrụ amakọghị m n'ihi na m na kwukwara ole na ole omenala utu aha m usoro.)
Ka ịgbakwunye a kpam kpam mkpari aha anyị mbe - ikpuru Ígwé ojii si Mbụ Nchọgharị na-edebe ya n'elu clip na ebe ị chọrọ a aha na-egosi.
IHE: Ana m eji a welara na usoro iheomume nyere m aka ịchọta otu ebe a na clip ya mere m ihuenyo gbaa na-agbanwe agbanwe. Nrịbama na-adịghị mkpa n'ụzọ ọ bụla n'ihi na utu aha.
Um, yeah. Ya mere, utu aha ụfọdụ anya ọzọ ndị ọkachamara karịa ndị ọzọ ... Ị nwere ike ihichapụ utu aha a ugbu a.
Ya mere, anyị:
Tinye utu aha iji keyboard Ụzọ mkpirisi
Ikpuru utu aha si Mbụ Nchọgharị
Gbanwee ọnọdụ site na-adọkpụpụta aha
Gbanwee oge site na-adọkpụpụta nsọtụ nke clip
Hichapụ a aha site na-ahọpụta ya ma na ịpị Nhichapụ isi
Na-agbanwe agbanwe TEXT
Tinye ọhụrụ zuru-ihuenyo aha (pịnye Control + T) na usoro iheomume. Ịgbanwe ederede na a aha, abụọ-pịa ya na nkiri. Ebe a, m na-gbanwere m aha "Otu Undersea Adventure."
IHE: Anyị nwekwara ike ịgbanwe ederede site na iji soja. Aga m na-egosi gị otú ị ole na ole paragraf. Buru bụla usoro bụ kacha maka gị.
All ederede, na ihe ọ bụla aha, ga-agbanwe site abụọ-ịpị ya na-ekiri ka họrọ ya, mgbe ahụ, na iji kọmputa ede ọhụrụ ederede na ị chọrọ iji.
Ị nwere ike Ọkpụkpọ ọ bụla ederede na ị nwere ike họrọ. Nke a pụtara na ị nwere ike Ọkpụkpọ dum nkebi ahịrịokwu, okwu, ma ọ bụ onye akwụkwọ ozi dị iche iche. N'ihi na isiokwu a, m ga-Ọkpụkpọ ihe niile otu, n'ihi na ozugbo ị maara otú a na-arụ ọrụ, ị nwere ike nnwale na gị onwe gị.
Ebe a, m họrọ m dum na aha ma meghere soja (shortcut Cmd + 4). Pịa Text taabụ ke n'elu. Nke a na ngalaba nke soja-enye gị ohere Ọkpụkpọ ederede.
IHE: The ederede igbe nso n'elu nke panel bụ nke abụọ ebe ị nwere ike họrọ ederede maka formatting.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a ngwa ngwa ụzọ Ọkpụkpọ ederede, pịa okwu "Nkịtị" ke n'elu. Nke a na-egosiputa a menu jupụtara dị iche iche ederede formats. Ụfọdụ n'ime ndị a formats anya mara mma na-emenye ụjọ; ndị fọdụrụ anya njọ.
IHE: Ị nwere ike ịmepụta gị ederede ekwekọghị. Rụtụ aka na Help maka ozi otú.
The Basic ngalaba nke soja-enye gị ohere ịgbanwe Akara ókwú, size, itinye n'ọnọdụ ... niile ọkọlọtọ font ntọala anyị na-ahụ ndị ọzọ omume. Ebe a, m na-gbanwere font ka Hobo Std, na 167 ihe.
Ezie na ọtụtụ n'ime ndị a ntọala na i maara na e nwere ihe ole na ole i nwere ike bụghị:
Line spacing. Adjusts na vetikal anya n'etiti edoghi n'ime otu paragraf.
Ndepụta. Adjusts kehoraizin spacing n'etiti akwụkwọ ozi.
Ntọala. Adjusts na vetikal spacing nke ederede tụnyere ndị kwụ n'ahịrị na-agba ọsọ thru etiti nke na-acha ọcha gburugburu na nkiri.
The Face ngalaba-enye anyị ohere ịgbanwe font agba, opacity na-acha anụnụ anụnụ. Guputa na-egbukepụ egbukepụ-enye anyị ohere tinye, ọ bụghị ihe ijuanya na, na-akọwapụta na glows. Ị nwere ike ịgbanwe ndị a ka ị na-ahụ ihe kwesịrị ekwesị - m agbasaghị ghara tinye ndepụta ma ọ bụ glows.
Otú ọ dị, m ike ikwu na-agbakwunye dobe onyinyo ka niile ederede na ị chọrọ ndị na-ekiri na-agụ. Video, ọbụna HD video, bụ ala mkpebi tụnyere ebipụta. Dobe onyinyo-eme ka gị ederede nnọọ mfe na-agụ. Ndị a bụ ntọala m nwere ike ikwu maka dobe Onyunyo.
Mgbe na-eme a ole na ole mgbanwe ndị na-soja, ebe a bụ ikpeazụ N'ihi. Nnọọ jụụ - na dị iche iche si ebe anyị malitere!
ACTION NCHEBE / ISIOKWU NCHEBE Ikpehe
Ebe ọ bụ na telivishọn mbụ mepụtakwara, anyị mkpa iji chefuo maka iche dị na TV tent site emebe ndịna-emeputa ịnọ n'ime Action Nchekwa na Mbụ Nchekwa ókè.
Mgbe ukwuu nke taa video e mere maka na weebụ, gị utu aha ga-ele anya ihe kasị mma ọ bụrụ na ị na-agbaso otu ụkpụrụ nduzi.
Gaa na Gbanye na-ekiri ma họrọ "Gosi Action Nchekwa / Mbụ Nchekwa Ikpehe."
Nke a na-egosiputa abụọ icha mmirimmiri rectangles na eku. Ná mpụta rektangulu na-akpọ "Action Nchekwa," n'ime onye a na-akpọ "Mbụ Nchekwa." Action Nchekwa bụ 5% na niile n'ọnụ; Mbụ Nchekwa bụ 10% na niile n'ọnụ ya.
Mgbe emebe ederede na-emeputa maka web, idebe ihe nile dị oké mkpa ọcha n'ime ná mpụta rektangulu. Mgbe emebe ndịna-emeputa na ederede maka na agbasa ozi n'ikuku ma ọ bụ USB, idebe ihe nile dị oké mkpa ọcha n'ime n'ime rektangulu.
Ebe a, ka ihe atụ, na-achọpụta na m aha a n'ụzọ zuru ezu ẹdude n'ime Action Nchekwa.
Utu aha na-enye anyị omume agwa na àgwà, gbakwunyere ha na-akọwara ihe na-aga na-ege ntị. Final Cut Pro X-enye a akụ na ụba nke formatting nhọrọ eme ka anyị na ederede anya ukwuu.
> Resource> FCP> Olee otú iji Tinye Aha na Final Cut Pro X